PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - ANETWETWE AMAPHOYISA ADUBULA ABULALA UCHILLIES
ANETWETWE AMAPHOYISA ADUBULA ABULALA UCHILLIES
Ilanga - 2017-09-14 - Izindaba - NOMFUNDO NGWANE nomfundo@ilanganews.co.za
AYATATAZELA amaphoyisa asoleka kwelokubulala isigebengu sodumo eMlaza, uMnu Sandile "Chillies" Bhengu (37), odutshulwe wabulawa ngeledlule esigcemeni sakwa-B khona eMlaza kusolwa ukuthi ubanjwe emotweni entshontshiwe ezama ukukhipha isiqophamkhondo ( tracker).
ILANGA lithole ngemithombo yalo engashayi eceleni - engaphakathi emaphoyiseni - ukuthi la maphoyisa asecele ukushintshelwa kwezinye iziteshi ezikude ngenxa yokuthi azibona engaphephile ngoku- dubula abulale uChillies.
Umthombo weLANGA uveza lokhu nje, kuthiwa la maphoyisa asehlabe ikhefu eliphuthumayo emsebenzini selokhu edubule lesi sigebengu sodumo.
“Kumanje bashusha abaphathi ukuba babayise kwezinye iziteshi ezizoba yimfihlo, sebeyesaba ukusebenza kulezi abasebenza kuzona. Selokhu kwenzeke lesi gameko, kasikaze sibabone emagcekeni esiteshi abasebenzela kusona,” kusho umthombo.
Kwenzeka lokhu nje, omunye wabangani bakaChillies okhulume emngcwabeni, uku- beke kwacaca ukuthi amaphoyisa adubule abulala umngani wabo bayawazi ukuthi angobani wabe esewasongela.
Abangani bakaChillies bakhala ngokuthi amaphoyisa kawahambisanga ngendlela efanele njengoba bethi amdumbule esephakamise izandla, ekhombisa ukuthi usezinikele ukuba ambophe.
"Okusidina kakhulu kuyona yonke le nto, leli phoyisa elenze lokhu belijwayele nokuthatha imali yentshontsho kuChillies,” kusho omunye wabangani bakhe.
UChillies ungcwatshiswe okweqhawe ngoMgqibelo ehholo lomphakathi esigcemeni sakwaM, eMlaza. Amaphoyisa abechithiwe ukuba ayoqapha isimo eMlaza ukuthi kungashaywa izidudla, kuqhunyiswe nezibhamu, okuyinto evame ukwenzeka uma kungcwatshwa isela lezimoto.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthi bebengakezwa lutho ngodaba lokushitshelwa kwala maphoyisa kwezinye iziteshi.
Ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa ahlabe ikhefu emsebenzini.